Sawirada Photoshop: halka laga soo dejinayo oo laga dhigayo kuwo tayo leh | Abuurista khadka tooska ah
Encarni Arcoya | | Textures
Naqshadeeye waxaan ognahay in isticmaalka qaabab sawir qaade waa wax lama huraan ah. Kuwani waxay si dhab ah iyo dabiici u yihiin sawirrada kicinaya dareenka kuwa iyaga fiiriya, waana taas si sax ah waxa uu qoraagu raadinayo.
Abuuritaanka dareemo dhab ah, sida haddii sawirka la taaban karo, sida haddii qalqalka ama jilicsanaanta sawirka la dareemay waa qaar ka mid ah ujeeddooyinka naqshadeeye, iyo si tan loo gaaro, qaababku aad ayey muhiim u yihiin. Laakiin, haddii aadan rabin inaad iyaga ka abuurto xoqiddaada, ama aad u baahan tahay inaad waxyaabo kala duwan u yeelato mashaariicdaada garaafka, halkan waxaan uga hadlaynaa bogagga aad ka heli karto soo dejiso sawirrada Photoshop.
1.1 Noocyada textures
1.2 Sida loogu daro qaabab muuqaal ah Photoshop
2 Xagee laga helaa sawirka Photoshop
2.3 Qaababka lacag la'aanta ah
2.4 Sawir -gacmeedka
2.6 Mayang's Textures Free
2.7 Sawirada Photoshop: Arroway Textures
Haddii aan ku hadalno jargon-ka sawir-qaadista dhijitaalka ah, qaabab sawir gacmeedka Photoshop waxaa lagu qeexi karaa inay yihiin lakabyo lagu daro sawir iyada oo loo marayo barnaamijka dib-u-habeynta oo leh dusha sare ka dhigaysa jilicsanaanta. Taasi waa, warqad, alwaax, wasakh, iwm. wax kasta oo sawirkaas siinaya xaqiiqo.
Si aad uhesho qaab dhismeedka waad sawiri kartaa waxaad rabto, iskaan ama xitaa ku abuuri qaabab kuu gaar ah Photoshop.
Sababta loo adeegsado qaabdhismeedka waa in la siiyo heer qoto dheer iyo dareen sawirkaas ah. Si kale haddii loo dhigo, waxay ku saabsan tahay isku xirnaanshaha adeegsadayaasha fiirinaya sawirka, si ay u kiciso dareenka. Sababtaas awgeed, sawir farsamadan leh waxay leedahay shaqo badan oo ka dhigaysa mid wanaagsan, waxay u egtahay in la siiyay lakab xaqiiqo ah oo ay tahay in si aad u wanaagsan loo dhejiyo si aan loo dareemin.
Waa inaad ogaataa inaysan jirin hal nooc oo qaabab ah. Runtii way badan yihiin in la kala doorto. Waxay ku xirnaan doontaa saameynta aad rabto inaad gaarto. Marka, tusaale ahaan, waxaad ka heli kartaa:
Qaababka dabiiciga ah. Iyagu waa kuwa raadinaya natiijo la xiriirta dareemayaasha: urta, aragga, dhadhanka, taabashada ... Tusaale ahaan, jilif geed, hirarka badda, dabaysha ...
3D qaabab. Waxay ku sifoobeen iyagoo si qoto dheer iyo mug leh u siinaya sawir qaab u muuqda inuu ka duwan yahay 2D.
Dhalanteed. Noocyada khiyaaliga ah ee 'Fantasy' waxay isku dayaan inay siiyaan sawir sixir ah, oo ay la socdaan qarsoodi ah, faahfaahin aan dhab ahayn oo aakhirka u rogaya sawirka muuqaal khiyaali ah laftiisa.
Wasakhda Mawduucyada dhibcuhu waxay isku dayaan inay gaaraan xaqiiqda maalinba maalinta ka dambaysa. Tusaalooyinka waxay noqon karaan dhibco koobabka kafee ah, dhibco shaashadda qubeyska ama daahyada, ama xitaa dhiig ama khad qalin ah.
Dharka dharka. Iska ilow shaqo ka joojinta, dharka ayaa raadinaya inay ku daydaan qalabka lagu sameeyay, laga soo bilaabo kuwa ugu jilicsan sida xariir, jilicsan, dhogorta, illaa tan ugu "xun".
Sida loogu daro qaabab muuqaal ah Photoshop
Ka soo qaad in aad heshay jajabkii aad raadineysay oo aad dooneysay inaad ugu isticmaasho mashruucaaga. Si kastaba ha noqotee, haddii aad tahay qof bilow ah oo aanad waligaa hore u samayn, way adkaan kartaa.
Marka halkan ayaan kaa tagnay tillaabooyinka ay tahay inaad qaado si aad u dhigto qaab dhismeedka Photoshop. Waxaa jira siyaabo badan, laakiin halkan waxaan ku siineynaa midka ugu fudud.
Fur Photoshop iyo sawirkaaga, marka lagu daro dusha sare ee aad dooratay oo aad rabto in sawirkaasi yeesho.
Tag qoraalka oo guji Sawirka / hagaajinta / Desaturate. Tani waxay ka saareysaa midabka maqaarka, maxaa yeelay runtii uma baahnin kiisaska badankood.
U gudbi sawirkaas adiga. sidan, lakab cusub ayaa lagu abuuri doonaa daabacaadaada mashruuca.
U beddel qaabka isku darka lakabka 'Dusha' iyo beddelaadda mugdiga, xoogga, dhalaalka ... waxaad awoodi doontaa inaad hesho natiijada aad raadineysay.
Xagee laga helaa sawirka Photoshop
Sidaan ognahay adiga adiga waxa ugu muhiimsan waa inaad ogaato bogagga laga helo sawir-gacmeedka Photoshop, Waxaan diyaarinay qaar ka mid ah boggaga aad ka heli doontid qaabab. Caadi ahaan waxaad ka heli kartaa banki kasta oo muuqaal ah, labadaba lacag iyo lacag la'aan, laakiin bogagga internetka qaarkood waxay leeyihiin wax badan. Ma rabtaa inaad ogaato halka?
Boggan si wanaagsan ayaa loo yaqaan maadaama uu ka mid yahay bangiyada ugu waaweyn ee bannaanka ku yaal. Hadda, ma lahan sawirro badan, laakiin waxay leedahay vector badan iyo sawirro la mid ah.
Iyo, dabcan, sidoo kale waxay leedahay qaabab aad u kala duwan. Qaar badan oo ka mid ahi waxay kuu oggolaadaan inaad soo dejiso faylka PSD, taas oo kuu fududaynaysa inaad la shaqayso oo aad wax ka beddelo.
Websaydhkan, sida magaceedaba ka muuqata, wuxuu ku saleysan yahay asalka webka, moodeelka 3d, iyo haa, qaabab. Dhexdeeda waxaad ka heli doontaa buug-gacmeed ballaadhan waxayna leeyihiin faa'iido ah inay labadaba u noqon karaan mid shaqsiyeed iyo mid ganacsiba.
Qaababka lacag la'aanta ah
Websaydh u gaar ah qaababka qoraalka? Haa haa, tani waa mid ka mid ah. Hadda, ma heli doontid dhammaan qaababka, laakiin waxay ku takhasustay qaabab dabiici ah ama darbiyo jaban.
Waxay sidoo kale leedahay qayb gaar ah oo loogu talagalay qaab dhismeedka grunge haddii ay yihiin waxa aad raadineyso.
Halkan, inkasta oo aad ka heli karto waxoogaa dahab ah oo bilaash ah, haddana dhammaantood dhammaantood waa in lacag la siiyaa si ay u helaan adeeg ganacsi. Laakiin runtu waxay tahay in badan oo iyaga ka mid ahi ay u qalmaan dhamaadka ay gaareen iyo tayada ay ku samaysan yihiin.
Sidoo kale, waa halka aad ka heli karto a noocyo kala duwan oo qaabab gaar ah, kuwa ay adagtahay in la helo ama la sameeyo naftaada.
Xaaladdan oo kale, tani waa mid ka mid ah Websaydhyada sawir-qaadashada ee Photoshop halkaasoo aad ka heli doontid tusaalooyin aad u tiro badan, oo loo abaabulay qaab ahaan iyo cabbir ahaan. Waa waxa ugu fiican ee jira runtiina waxay tahay in dhammaantood ay leeyihiin tayo aad u wanaagsan. Dabcan, si aad u soo dejiso qaar ka mid ah waxaad u baahan tahay inaad haysato koonto bilaash ah, iyo haddii sawirradu ay waaweyn yihiin cabbir ahaan, markaa waxaad u baahan tahay koonto caymis ah (oo lacag ku kacaysa).
Laakiin guud ahaan, cabirka dhexdhexaadku aad buu u shaqeeyaa.
Mayang's Textures Free
Websaydhkan waxaad ka dooran kartaa midka in ka badan 4000 sawir faylal ah oo ay martigelisay. Webku wuxuu leeyahay naqshad aad u duug ah, laakiin macnaheedu maahan in xulashooyinka ay ku siinayaan aysan ahayn kuwo tayo leh, taas lidkeed.
Waxaad ka heli kartaa iyaga oo loo qaybiyay qaybo kala duwan, kuwaas oo kaa caawin doona inaad hesho waxaad raadineysay.
Sawirada Photoshop: Arroway Textures
Ku takhasusay qaab dhismeedka Photoshop, webka wuxuu marti geliyaa noocyo badan oo qaabab dijitaal ah oo ka kala socda qaybo kala duwan. Hadda, iyagu xor ma aha. Waxay leeyihiin tayo aad u fiican oo dhammaad ah, laakiin waa inaad lacag ka bixisaa iyaga.
Waxay kuu ogolaanayaan adiga ikhtiyaar u leh inaad ku soo dejiso qaababka qaab hoose, laakiin kaliya u isticmaal shakhsi. Tani waxay kaa caawin kartaa inaad sawir ka sameyso mashruucaaga, oo haddii macaamilku uu jecel yahay, ka dib iibso.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » Khayraadka » Textures » Sawirada Photoshop: halka laga soo dejinayo